बढ्दो सूर्य चित्र शिक्षा: योनाह एन्डरसन साक्षात्कार - NAB प्रसारण बिट द्वारा समाचार। आधिकारिक प्रसारणकर्ता NAB शो, निर्माताको NAB शो लाइभ
घर » समाचार » बढ्दो सूर्य चित्र शिक्षा: योनाह एन्डरसन साक्षात्कार
बढ्दो सूर्य चित्र शिक्षा: योनाह एन्डरसन साक्षात्कार
एक जना पेशेवर कसरी सिक्दै।
एडिलेड, दक्षिण अष्ट्रेलिया- सूर्य चित्र चित्र शिक्षा बढ्दो चरणमा ढुङ्गाको रूपमा सेवा गरेको छ जुन धेरै युवा कलाकारले कक्षाबाट उद्योगलाई छलांग बनाउन प्रयोग गरेको छ। जोनाह एन्डरसन एक छ। सफलतापूर्वक यस बर्षको सुरुवात गतिशील प्रभाव र प्रकाशमा आरएसपी / युएनएसए 12-हप्ता स्नातक प्रमाणपत्र कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ, योनाहले एडिलेड मा टेक्नरररको नयाँ-शुरुवात मिल फिलिम स्टूडियोमा जुनियर एक्सएनएमएक्सएडी लाइटिंग कलाकारको रूपमा उनको पहिलो रोजाई पाएको छ। बिक्री, विक्टोरिया देशी अब अब 3D भिजुअल इफेक्ट टेक्नोलोजीहरूमा सिक्ने क्षमताहरू प्रदान गरिनेछन् जुन विश्वव्यापी सिनेमा सिनेमाहरूको लागि उपयुक्त फिल्म परियोजनाहरूमा व्यावहारिक उपयोग गर्न सकिन्छ।
जोनाहले भर्खरै आरएसपी सँगै आरएसएसमा आफ्नो अनुभवको बारेमा कुरा गरे, उनको नयाँ जागिर र उनको भविष्य।
आरएसएसपी: तपाईंले पहिलो पटक भिजुअल प्रभावहरू कहाँ अध्ययन गर्नुभयो?
योनाह एन्डरसन: एआईई (अकादमी इंटरैक्टिव एंटरटेनमेंट) मा एडिलेड मा। म 18 थियो र एनीमेशनको बारेमा सिक्न चाहन्थे तर मेरो गृहनगर, बिक्रीले केहि पनि प्रस्ताव गरेन। यो भयो, मेरो आमाबाबुले एडिलेडलाई चल्ने योजना बनाउँदै थिए र एआईई भर्खरै खोलिएको थियो, त्यसैले म तिनीहरूसँग जान्छु।
आरएसएसपी: तपाईंले के गर्नु भयो?
JA: 3D एनिमेसन र दृश्य प्रभावहरू। मैले खेल कार्यक्रममा सुरू गरेँ, तर अन्ततः फिल्ममा पठाइयो र स्क्रिन र मिडियामा उन्नत डिप्लोमा कमाई।
आरएसएसपी: तपाईले आरएसएसलाई कसरी नेतृत्व गर्नुभयो?
JA: एआईआई एक खुला घर थियो र एक बोल्ने रङ सन फोटो बाट थियो। मैले सोधेँ कि मलाई स्कूलबाट सीधा नौकरी प्रदान गरिएको छैन भने, मैले आरएसएसएसमा केही अनुभव पाएँ।
आरएसएसपी: तपाईंले कसरी पाठ्यक्रम खोज्नुभयो?
JA: यो साँच्चै उत्थान थियो। तपाईं स्टुडियो वातावरणमा काम गर्नुहुन्छ र पेशेवरहरूबाट सिक्न सक्नुहुन्छ, र तपाईं तिनीहरूलाई कुनै पनि समयमा संलग्न गर्न सक्नुहुन्छ। मैले एउटा स्टुडियो कसरी काम गर्दछ भन्ने महसुस गरेको छु, मानिसहरू कसरी अन्तरक्रिया गर्छन्। यो कोर्स स्वयं गतिशील प्रभाव र प्रकाश मा स्नातक प्रमाणपत्र कार्यक्रम थियो। हामीले मुख्य रूपमा हाउडिनी प्रयोग गर्यौँ। यो सफ्टवेयर प्रयोग गरेर यो मेरो पहिलो पटक थियो।
आरएसएसपी: के तपाईं गति बढ्नको लागि यो कठिन थियो?
JA: थोडा सा। मेरो केहि सहपाठीहरूले हाउडिनीसँग अनुभव गरेका थिए, त्यसैले मैले केहि गर्न सकिनँ। तर तिनीहरू सबैले मलाई मदत गरे। मैले पहिले प्रयोग गरेको सफ्टवेयरबाट अवधारणा फरक फरक थियो, तर एक पटक मैले विश्वास प्राप्त गरेपछि यो सजिलो थियो।
आरएसएसपी: के तपाईं पाठ्यक्रमको आनन्द लिनुभयो?
JA: ओह हाँ, मैले यो माया गरे! यो अद्भुत थियो।
आरएसएसपी: के तपाइँका कुनै पनि प्रशिक्षकले तपाइँलाई कुनै खास असर पारे?
JA: हो। ग्रेग र सैम, हाम्रो प्रकाश प्रशिक्षकहरू, मेरो सम्पूर्ण विचार प्रकाशको बिरुद्ध बदल्यो। जब म पाठ्यक्रममा सामेल हुन्थ्यो, मैले सोचेँ कि म कहिलेकाहीं प्रकाशमा चासो छैन। म VFX मा जान चाहन्छु, तर आधा बाटो त्यो फ्लिप मार्फत। ग्रेगले हामीलाई अझै पनि देखाए राक्षस, इंक र प्रकाश विवरण को संकेत दिए, कसरि तपाईं प्रकाश को उपयोग गर्न को लागि निश्चित रंगहरु लाई चुन सकते हो। उहाँ यसको बारेमा धेरै उत्साहित हुनुभयो, र त्यो मलाई माला लगाईयो। मैले थाहा पाएको छु कि तपाईं प्रकाशसँग कथा बताउन सक्नुहुन्छ, वा दर्शकको एक निश्चित क्षेत्रमा दर्शकको आँखा प्रत्यक्ष रूपमा। उहाँले शाब्दिक रूपमा हामीलाई कसरी कलामा प्रकाश बदल्न सिकाउनुभयो।
आरएसएसपी: तपाइँका कौशलहरूले ती 12 हप्ताहरूमा कति परिवर्तन गर्यो?
JA: तिनीहरूले धेरै, धेरै छिटो सुधार गरे। जब मैले आरएसएसमा आवेदन गरें, मैले सोचेको थिएन कि म स्वीकार गरें। मैले पाठ्यक्रम पूरा गरेपछि, मैले मलाई मायालु प्रकाश प्रदर्शन गरेका थिए। मैले यसलाई टेक्नरलिनलाई विश्वास गर्न पठाएको छु कि मलाई एक नौकरी गर्ने मौका थियो। मलाई पाठ्यक्रममा धकेल्न सक्ने बारे मैले धेरै राम्रो महसुस गरे।
आरएसएसपी: प्राविधिक प्रशिक्षणको बावजूद, तपाइँ एक पेशेवर कलाकार हुनुको बारेमा के सिक्यौं?
JA: हामीले दैनिक जीवनको सत्रमा भाग लि्यौं जहाँ हामी उद्योगका व्यावसायीहरूको स्तरमा उजागर गरिरहेका थियौं जसले तिनीहरूको कामबारे हामीलाई कुरा गर्यो। हामी पनि भर्ती भएका धेरै सत्रहरू सँग छ जसले हामीलाई रोजगारका लागि आवेदन गर्ने सल्लाह, साक्षात्कारका क्रममा आफैलाई कसरी व्यवहार गर्ने, र कुन नियोक्ताहरू शोवृत्तमा हेर्छन्। यसले मलाई मेरो नौकरी साक्षात्कार संग धेरै सहयोग गर्यो।
आरएसएसपी: के कार्यक्रमले तपाईको अपेक्षाहरु पूरा गर्यो?
JA: यसले तिनीहरूलाई पार गर्यो। पहिलोमा, मैले सोधे कि यो धेरै गाह्रो हुने थियो, कि म केहि बुझ्दैन। तर त्यो सत्य नबिर्सनु भयो। तपाईले गर्नु पर्छ सबैलाई समर्पित छ र कडा मेहनत गर्दछ। तीन महिनामा, राइजिंग सन चित्रहरूले मलाई कसरी प्रोफेशनल सिकाउनुभयो।
आरएसएसपी: तपाईंले द मिलिमा आफ्नो काम कसरी गर्नुभयो?
JA: मलाई एक चचेरे भाई छ जसले उद्योगमा काम गर्छ र उनले मलाई भनिन् कि टेक्नीकलर एडिलेडमा आउँदै थियो। मैले श्वेतमा लागेँ। दुई हप्ता पछि, उनीहरूले मलाई साक्षात्कारको लागि बोलाए। दुई हप्ता पछि, मलाई नौकरी प्रदान गरिएको थियो।
आरएसएसपी: उत्कृष्ट। बधाई छ!
JA: धन्यवाद। यो राम्रो प्रशिक्षण र राम्रो समय थियो।
आरएसएसपी: तपाईंको काम के हो?
JA: म हाल प्रकाश व्यवस्थामा प्रशिक्षण गर्दैछु। हामीले अहिलेसम्म उत्पादन सुरु गरेका छैनौ। तिनीहरू कटाना प्रयोग गर्छन्। त्यसैले, म फेरि नयाँ कार्यक्रम फेरि सिकिरहेको छु। तर यो ठीक छ। यो हाउडिनीसँग धेरै नै छ।
आरएसएसपी: अन्ततः तपाईं मनोरञ्जन परियोजनाहरूमा काम गर्दै हुनुहुन्छ?
JA: फीचर फिल्महरू मुख्य रूपमा। म सानो बच्चा भएको कारण फिल्महरू काम गर्न चाहन्छु। यो एक झटका को प्रकार छ कि म मेरो पहिलो नौकरी मा फिलिमहरु मा काम गरेर रहयो हूँ।
आरएसएसपी: तपाईं यहाँ बाट कहाँ जानुहुन्छ?
JA: म वैंकूवर वा लन्डनमा जान चाहन्छु। मेरो एक दिन मेरो आफ्नै स्टूडियो खोल्ने सपना छ। तर त्यसो गरे पछि मैले केहि नेटवर्किङ गरें र मान्छे जान्न पाउछु।
आरएसएसपी: अन्य इच्छुक कलाकारहरूको लागि के तपाइँसँग सल्लाह छ?
JA: प्रक्रियाको आनन्द लिनुहोस्। आफैमा धेरै गाह्रो हुनुहोस्। हामी सबैलाई कहीं सुरू गर्नु पर्छ। कामदार पेशेवर बन्न धेरै घण्टा लाग्छ। कडा मेहनत गर्नुहोस् र एक बलियो प्रस्तुतीकरण सँग जोड्नुहोस् जुन तपाइँ व्यक्तिको रूपमा हुनुहुन्छ। आफ्नो काममा विश्वास रहनुहोस् र तपाईले पाउनुहुनेछ। यदि तपाईंले मलाई गत वर्ष बताउनुभएको छ कि म प्रकाश कलाकारको रूपमा काम गरिरहेको छु, म हल्लायो। तर यहाँ म हुँ।
उदाउँदो सूर्य तस्वीर बारेमा:
मा उदाउँदो सूर्य तस्वीर (आरएसपी) हामी विश्वव्यापी प्रमुख स्टुडियो लागि प्रेरणादायक दृश्य प्रभाव सिर्जना गर्नुहोस्। उल्लेखनीय तस्बिरहरू सिर्जना हाम्रो अस्तित्व को कोर छ। हाम्रो प्रतिभाशाली टोली को दिल मा, वहाँ एक विविध ज्ञान र सिप-सेट, जहाँ हामी सँगै समस्या समाधान र हाम्रो ग्राहकहरु ठूलो दृश्यहरू छुटाउन काम गर्न सक्छन् एक सहयोगी कोर सक्षम छ। हामी प्राविधिक चुनौतीपूर्ण काम गर्न नवीन समाधान प्रदान गरेर केही साँच्चै अचम्मको दृश्य प्रभाव काम हासिल गरेका छन्। हामी हाम्रो ग्राहकहरु को आवश्यकता अनुरूप स्केल क्षमता र प्रतिभा पूल छ।
हाम्रो व्यापक चलचित्र फोटोग्राफीले टम्ब Raider, Peter Rabbit, Thor: Ragnarok, Logan, X-Men: Apocalypse, Thrones Season Season NNXX, The Legend of Legend, God of Egypt, Pan, X-Men सहित 120 परियोजनाहरू समावेश गर्दछ: भविष्यका दिनहरू भूत, भूख खेल मताधिकार, हैरी पोटर मताधिकार, गुरुत्वाकर्षण, ब्वावर, प्रो Promheheus र ग्रेट Gatsby।
कालिगढहरु पीआर द्वारा नवीनतम पोस्ट (सबै हेर)
Killer Tracks Now Offering Sound Effects from the Sounddogs Library - नोभेम्बर 13, 2018
Motion Picture Sound Editors to Honor Antoine Fuqua with Filmmaker Award - नोभेम्बर 13, 2018
बढ्दो सूर्य चित्र शिक्षा: योनाह एन्डरसन साक्षात्कार - नोभेम्बर 8, 2018
शिक्षा स्पियर र तीरहरू दृश्य प्रभाव	2018-11-08
अघिल्लो: क्यालेरी चैपल एमलस्टो नियन्त्रण कक्ष चलाउछ, अपग्रेडहरू पिक्सेलमा Pix BPswitch Integrated Production Switcher
अर्को: ब्यानिस्टर लेकको साझेदारीमा प्रत्यक्ष डाटा ग्राफिक डिजाइन फर्म मोशन पथको साथ घोषणा गरेको छ
अभिलेख महिना चयन गर्नुहोस् नोभेम्बर 2018 (247) अक्टोबर 2018 (496) सेप्टेम्बर 2018 (495) अगस्ट 2018 (398) जुलाई 2018 (876) जुन 2018 (869) May 2018 (871) अप्रिल 2018 (831) मार्च 2018 (780) फेब्रुअरी 2018 (685) जनवरी 2018 (605) डिसेम्बर 2017 (396) नोभेम्बर 2017 (712) अक्टोबर 2017 (835) सेप्टेम्बर 2017 (608) अगस्ट 2017 (583) जुलाई 2017 (710) जुन 2017 (543) May 2017 (621) अप्रिल 2017 (695) मार्च 2017 (704) फेब्रुअरी 2017 (340) जनवरी 2017 (364) डिसेम्बर 2016 (608) नोभेम्बर 2016 (344) अक्टोबर 2016 (556) सेप्टेम्बर 2016 (622) अगस्ट 2016 (1056) जुलाई 2016 (532) जुन 2016 (414) May 2016 (505) अप्रिल 2016 (713) मार्च 2016 (743) फेब्रुअरी 2016 (382) जनवरी 2016 (122) डिसेम्बर 2015 (358) नोभेम्बर 2015 (327) अक्टोबर 2015 (152) सेप्टेम्बर 2015 (259) अगस्ट 2015 (440) जुलाई 2015 (276) जुन 2015 (140) May 2015 (128) अप्रिल 2015 (435) मार्च 2015 (289) फेब्रुअरी 2015 (298) जनवरी 2015 (131) डिसेम्बर 2014 (103) नोभेम्बर 2014 (194) अक्टोबर 2014 (149) सेप्टेम्बर 2014 (381) अगस्ट 2014 (250) जुलाई 2014 (287) जुन 2014 (363) May 2014 (231) अप्रिल 2014 (744) मार्च 2014 (560) फेब्रुअरी 2014 (427) जनवरी 2014 (289) डिसेम्बर 2013 (137) नोभेम्बर 2013 (545) अक्टोबर 2013 (290) जुलाई 2013 (26) May 2013 (13) अप्रिल 2013 (1) मार्च 2013 (2)0(306)
उत्पादन कलाकार / एन्ट्री लेवल स्थिति
अरे बुद्ध!, मैले तपाईंको लागि यो जानकारी पाए: "सूर्य चित्र शिक्षा बढाउँदै: जोनाह अन्डरसन साक्षात्कार"। यहाँ वेबसाइट लिङ्क हो: https://www.broadcastbeat.com/rising-sun-pictures-education-joannah-anderson-interview/। धन्यवाद।